Ukujonga kwiiNdawo ezahlukeneyo zoMsebenzi woLwazi
Funda oko kuthanda ukusebenza kwimisebenzi eyahlukeneyo kunye nemibutho yeendaba
Ngoko ufuna ukungena kwiindaba zoshishino , kodwa awuqinisekanga ukuba uluhlobo luni lomsebenzi olufanelana neemfuno zakho nezakhono? Amabali oya kufumana apha aya kukunika umxholo wento efana nokusebenza kwimisebenzi eyahlukeneyo, kwiindidi zeendaba zeendaba. Uza kufumana ulwazi malunga nokuba uninzi lwemisebenzi kwi-journalism, kwaye ungakanani na onokulindela ukwenza.
Ukusebenza kwiiMaphephandaba zoLuntu kwieveki
Hill Street Studios / Getty Izithombe
Iimviwo zoluntu zeveki zilapho apho abaninzi beendaba beqala khona. Kukho amawaka amaphepha afana nawo afumaneka kwiidolophana, iinqanawa kunye nemimandla kwilizwe lonke, kunye namathuba oye wawabona okanye mhlawumbi athabatha enye kwi-newsstand ngaphandle kwevenkile okanye ishishini lendawo.
Ukusebenza kwi-Daily-Daily Daily Newspapers
UpperCut Izithombe / Getty Izithombe
Xa usugqibile iikholeji kwaye mhlawumbi usebenza kwiphepha leveki okanye elincinci lemihla ngemihla, isinyathelo esilandelayo siza kuba ngumsebenzi ophakathi kwimihla ngemihla, enye inokusasazeka kuyo yonke indawo ukusuka kuma-50 000 ukuya kuma-150,000. Amaphepha afana nawo afumaneka kwiidolophana ezincinci kwilizwe. Ukubika kwimihla ngemihla ehlukeneyo kuyahluke ekusebenzeni ngeveki okanye ezincinci imihla ngemihla ngeendlela ezininzi.
webphotographeer / Getty Izithombe
Ngaba uyivile ibinzana elithi "umsebenzi onzima kunayo yonke oyithandayo?" Ubomi ku -Associated Press . Le mihla, kukho iindlela ezahlukeneyo zomsebenzi onokuzithatha kwi-AP, kubandakanyeka kwi-radiyo, iTV, i-web, imifanekiso kunye neefoto. I-AP (ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuthi "inkonzo yocingo") yinkampani yeyona ndlela indala kunye nenkulu yeendaba. Kodwa ngelixa i-AP ibanzi ngokubanzi, ama-freeaus ngabanye, nokuba ngaba e-US okanye ngaphandle, bahlala bebancinci, kwaye bahlala bebanjwe ngabaphathiswa abancinci nabahleli.
Ngaba Abahleli Benza ntoni?
agrobacter / Getty Izithombe
Kanye njengoko umkhosi unomlinganiselo wolawulo, amaphephancwadi anokhetho oluphezulu lwabahleli abajongene nemimandla eyahlukeneyo yokusebenza. Bonke abahleli balungiselela amabali kwinqanaba elinye okanye elinye, kodwa abahleli bezabelo bajongana nabaphengululi, ngelixa abahleli bekopi babhala iintloko kwaye kaninzi benza ukubeka.
Yintoni efana nokuGubungela iNdlu yeNdlu?
Chip Somodevilla / Getty Izithombe
Zizinye zeendaba zeendaba ezibonakalayo kwihlabathi. Bayiyo intatheli efuna ukuphendula imibuzo kumongameli okanye kumabhali wakhe weenkcukacha kwiinkomfa zeendaba kwiNdlu ye-White House. Ziyamalungu omzimba weNdlu ye-White House. Kodwa baye baphela njani ukugubungela enye yezona zibetho ezidumileyo kuzo zonke iindaba?
Rafel Rosselló Comas / EyeEm / Getty Izithombe
Uninzi lwezikolo zesikolo namhlanje zifuna ukuqala imisebenzi yazo kwiindawo ezifana neNew York Times, Politico kunye ne-CNN. Kuhle ukuba unqwenele ukusebenza kwiinkampani ezinzulu zeendaba, kodwa kwiindawo ezinjengekho aziyi kuba nzima ukuqeqeshwa emsebenzini. Uya kulindeleka ukuba uthinte umhlaba osebenzayo.
Kulungile ukuba ungobuqili, kodwa ezininzi zeekholeji zidinga indawo yokuqeqeshwa apho zingaqeqeshwa khona, apho zingafunda khona - kwaye zenze iimpazamo - ngaphambi kokuba zithinte ixesha elide.
Ziphi na zonke iiMisebenzi kwi-Journalism? Amaphephandaba.
Caiaimage / Sam Edwards / Getty Izithombe
Ngoko ufuna ukufumana umsebenzi kwi-journalism? Faka isicelo kwiphephandaba.
Ngokuqinisekileyo, kukho intetho eninzi kwiminyaka yamuva nje ibanga ukuba amaphephandaba afa kwaye ukushicilela i-journalism kuya kutshabalaliswa. Ukuba ufunda le ndawo uya kukwazi ukuba ngumthwalo werhafu.
Ewe, kukho imisebenzi embalwa kunokuba kukho, uthi, elishumi leminyaka edlulileyo. Kodwa ngokwemibiko ye-Pew Centre ye-"State of News Media", ama-54 ekhulwini kwabathengi abangama-70,000 abaqeshwe kumsebenzi wase-US - uqikelele ukuba - amaphephandaba, okona lukhulu kunaliphi na uhlobo lweendaba zeendaba.
Ingakanani Imali Ongayenza Kusebenza Kwi-Journalism?
Mihajlo Maricic / EyeEm / Getty Izithombe
Ngoko luhlobo luni lomvuzo onokulindela ukwenza njengomthubi weendaba?
Ukuba uchithe naliphi na ixesha kwiindaba zoshishino, mhlawumbi uvile intatheli ithi: "Musa ukungena kwi-journalism ukuze uzuze. Kodwa kunokwenzeka ukwenza impilo efanelekileyo ekushicileleni, kwi-intanethi okanye kwi-journalism.
Ulwakhiwo lweNkundla yeNkundla yeSizwe
Itheyibhile yoTyunjwa kwietenzi zesiTaliyane '
Njani Izinyosi zeNyoko Zenza I-bexis
Ngaba Kuphosakeleyo ukugculela iinkolelo zonqulo, amaziko kunye neenkokheli?
Umculi-Umculi uRay Charles waba yimfama njani?
Usebenze njani iCandelo leeKhendi zokuzalwa?
Yiyiphi indlela eyahlukileyo phakathi kweBaseide kunye nangaphandle koko
I-Triple H Ifoto yegalari
Biography kaRobert Frost
Iipalete zeMasters: uGauguin
Incoko yesiFrentshi "Voilà"
Iminyaka Eminyaka YeMfazwe